सेयर बजारमा लगानी गर्दे हुनुहुन्छ ? यि कुराहरुलाई ध्यान दिन आवश्यक छ « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
सेयर बजारमा लगानी गर्दे हुनुहुन्छ ? यि कुराहरुलाई ध्यान दिन आवश्यक छ
२७ श्रावण २०७२, बुधबार ०३:३२
सेयर बजारमा लगानी गर्दे हुनुहुन्छ बुझेरमा मात्र लगानी गर्नुहोस अन्यथा तपाईले जिवनभर कमाएको पैसा थप जोखिममा पर्नसक्छ । यदि तपाईले बुझेर लगानी गर्नुभयो भने त्यसले उचित प्रतिफल पनि दिन सक्छ । यसकारण सेयरबजारमा लगानी गर्नुअगाडि यि कुराहरुलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।
१.सार्वजनिक निष्काशन (Public Issue) भएको समयमा धितोपत्र खरीद गर्दाः
२.धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकरण भएका धितोपत्रहरु खरीद र बिक्री गर्दाः
३.ध्यान दिनुपर्ने अन्य कुराहरुः
प्रकाशित : २७ श्रावण २०७२, बुधबार ०३:३२